Iine anopfuura makumi mana emakumi ezviitiko zviitiko zveCOVID mumazuva maviri India inobvunza matunhu maviri kuti agadze nguva dzekudzoka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Iine anopfuura makumi mana emakumi ezviitiko zviitiko zveCOVID mumazuva maviri India inobvunza matunhu maviri kuti agadze nguva dzekudzoka
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Hurumende yeIndia yakakumbira nyika dzeKerala neMaharashtra kuti vatarise nguva dzekupinda husiku sematambudziko matsva eCOVID.
India yakashuma kudarika 40,000 hutachiona hutsva hweCOVID-19 kwemazuva maviri akateedzana neChishanu.
Hutsva hutachiona hwekoronavirus hwakwira zvakanyanya muIndia mumazuva matatu apfuura.
Kerala yakaverengera angangoita 60% ezviitiko zvitsva muvhiki rapfuura, ichiteverwa ne16% muMaharashtra.
Hurumende yepakati yeIndia yakurudzira nyika dzeKerala neMaharashtra kuti vadzikise nguva dzekudzokera husiku munzvimbo dzine manhamba ehutachiona hwecoronavirus sezvo India yakanyora pamusoro pemakumi mana emakumi mana emakesi eCOVID-40,000 kwemazuva maviri akateedzana nhasi.
Mhosva dzeCoronavirus dzakadzikira kusvika pamwedzi mishanu pasi pe5 25,166 pakati paNyamavhuvhu asi dzakasimuka zvakanyanya mumazuva matatu apfuura, kunyanya muKerala iyo ichangobva kuita mutambo mukuru panguva iyo mhuri dzinowanzosangana.
India yakazivisa hutachiona hutsva hweECVID-44,658 hwe19 nemusi weChishanu, ichitora huwandu hwacho kusvika pamamirioni makumi matatu nematanhatu, chikuru pasirese mushure meUnited States. Rufu rwakakwira nemakumi mana nematanhatu kusvika pamakumi mana nematanhatu nemakumi matatu nematatu.
Kerala, pamucheto wekumaodzanyemba kweIndia, yakave neinoda kusvika makumi matanhatu muzana muzana yemakesi matsva muvhiki rapfuura uye inopfuura hafu yezviitiko zvese zvinoshanda, zvichiteverwa ne60 muzana kumadokero kwenyika yeMaharashtra.
"Kuedza kwakawanda kunodikanwa kusunga kuwedzera kwezvirwere," iyo ushumiri hwemubatanidzwa akadaro muchitaurwa neChina manheru mushure mekunge munyori wavo aita musangano nematunhu maviri aya, panguva iyo Kerala neMaharashtra vakakumbirwa kuti "vaongorore mukana wekumisa husiku munzvimbo dzakanyanya kunaka".
Gurukota rakavimbisa zvakare kuti zvimwe zvekushandisa zvejekiseni reCOVID-19 zvichatumirwa kumatunhu maviri aya.
India kusvika parizvino yakapa zvinopfuura mamirioni 611 emiyero yekudzivirira, ichipa imwe chete dhosi kune inopfuura hafu yevakuru vayo mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemana uye madosi maviri anodiwa kusvika gumi neshanu muzana.